देशै हल्लिनेगरी फेरि गयो ६.१ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ? — Sanchar Kendra
देशै हल्लिनेगरी फेरि गयो ६.१ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
एजेन्सी । चीनको तिब्बतमा भूकम्पकको धक्का महशुश गरिएको छ । शुक्रबार ६ः१ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको चिनियाँ भूकम्प सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार उक्त भूकम्प शुक्रबार अपराह्न २:४१ बजे गएको थियो । भूकम्पको केन्द्र जमिनको सतहबाट कबिर १० किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो । उक्त भूकम्पबाट जनधनको कुनै क्षति भए नभएको बारेमा विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यस्तै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या २७ लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ४६५ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या २७ लाख २ हजार ४५५ पुगेको छ ।
त्यस्तै यता कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर शुरू भएपछि फ्रान्सको राजधानी पेरिससहित विभिन्न १५ शहरमा फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । शुक्रबार मध्यरातबाट घोषणा गरिएको लकडाउन एक महिनासम्म जारी रहने फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जीन केसटेक्सले जनाएका छन् ।
यद्यपि यो लकडाउनमा पहिलेको जस्तो कडा नहुने अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका छन् । नयाँ लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै कामहरु बन्द रहने छन् । तर विद्यालय भने खुला हुने फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्री ओलिविर वेरनले बताएका छन् । फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ३४ हजार ९९८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोना खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मागे माफी !
शुक्रवारदेखि हराएको जहाज साइबेरियामा भेटियो, सवार १९ यात्रुको अवस्था के छ ?
भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको वास्तविक संख्या ४० लाख नाघेको खुलासा, के भन्छन मोदी ?